३१ बर्षिय सुन्दरी रस्मी पन्त जो प्रभु बैंकको एचआर हेड हुन् ! – Janapriyakhabar
३१ बर्षिय सुन्दरी रस्मी पन्त जो प्रभु बैंकको एचआर हेड हुन् !
पन्तको उमेर समूहका धेरै युवा जागिरको खोजीमा छन् । तर, उनी तिनै तन्नेरीको ‘इभ्यालुएसन’ गरेर बैंकमा कर्मचारी नियुक्त गर्छिन् । उनले बैंकमा २१ सय कर्मचारीको विभागीय प्रमुख एचआर हेडहख रुपमा काम गरिरहेकी छिन् । गन्तव्य पहिचान नगरी भौँतारिरहेका युवाका लागि उनी आदर्श बन्न सक्छिन् । उनको प्रष्ट दृष्टिकोण र लाइफ प्लानले ‘करिअर’लाई अघि बढ्न सहयोग पुगेको छ । उनबाट नयाँ पुस्ताले धेरै सिक्न सक्छ ।
कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं १८ की पन्त बैंकिङ करिअरमा कम उमेरमै उच्च पदमा पुग्ने बैंकर महिलामा पर्छिन् । बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छोटो समयमै उच्च पदीय जिम्मेवारी सफलताका साथ पूरा गरेकी छिन् । पन्तले ‘विनापरिश्रम फल त्यसै फल्दैन, परिश्रम निरन्तर गरिरहनुपर्छ’ भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गरिन् । त्यही आदर्शलाई मूल मन्त्र बनाएर अघि बढ्दा उनलाई सफलताको सिँढी चढ्न सघाउ पुगेको छ ।
पन्त आफ्नो दायित्व पूरा गर्दै बैंकको उच्च पद प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मा पुग्न ‘गोरेटो’ बनाउँदै छिन् । नेपालको बैंकिङ इतिहासमा २८ वटा कमर्सिलय बैंकमा अहिलेसम्म एक जना मात्र महिला सिइओ छन् । सबैतिर ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको कुरा भैरहेका बेला बैंकिङ क्षेत्रको उच्च पदमा महिलाको किन खडेरी छ त ? त्यो ‘स्पेस’लाई पूरा गर्ने उनको दृढता छ । महिला भएकै कारण मात्र अवसर पाउनु पर्छ भन्नेमा उनले विश्वास गर्दिनन् । तर, आफ्नो जिम्मेवारीलाई सफलताका साथ पूरा गरेर ‘सिइओ’ बन्न ढोका खुल्नेमा आशावादी छन् । ‘आफूले काम गरेको क्षेत्रको प्रमुख पदमा पुग्ने इच्छा हुनु स्वाभाविक हो,’ रस्मीले भनिन्, ‘त्यसका लागि मिहिनेत गरिरहेकी छु ।’
मोडलिङ : प्रभु बैंकको डिजिटल विज्ञापन झट्ट हेर्नेले उनलाई मोडल भन्छन् । डिजिटल डिस्प्लेदेखि टेलिभिजनमा बज्ने बैंकका सबै विज्ञापनमा उनको ‘लिड रोल’ देखिन्छ । तर, उनी मोडल नभएर बैंकर हुन् ।
(यो समाचार दिलिप पौडेलले नागरिक दैनिक अनलाइनका लागि लेखेका हुन् । हामीले साभार गरेका हौ)